U-Olisa Ndah we-Orlando Pirates
I-Orlando Pirates ilindele ukuthola abalandeli abazoyeseka e-Uyo, eNigeria ngenxa yokuthi ibophele u-Olisa Ndah obedlala kule nkundla ezodlala kuyo umdlalo wamanqamu kwiCaf Confederation Cup ngoLwesihlanu.
Lokhu kuvezwe umqeqeshi zeZimnyama uFadlu Davids ngesikhathi ekhuluma nabezindaba ngaphambi kokuthi leli qembu lilibangise eNigeria ngoLwesibili.
Ngaphandle kukaNdah, iPirates ivele inegama eNigeria kwazise baningi abadlali bakhona asebeke bagijima kuyo.
Kubo singabala o-Onyekachi Okwonko, Williams Okpara, Sonny Opara, noSam Pam kanti njengamanje kukhona yena u-Olisa Ndah.
UDavids uthi uNdah ubedlala kuyo le nkundla iGodswill Akpabio Stadium ngesizini edlule ngaphambi kokuza kwiBucs.
FUNDA NALA: UZwane uthi indodana kaScara Ngobese isahlolwa kwiChiefs
“Sijabule ngokuthi kuzodlalelwa enkundleni engavuni muntu, futhi ukuba lo mdlalo bewuzoba seMorocco besizokhala impela,” kusho uDavids.
Komunye umdlalo wamanqamu emiqhudelwaneni yamaqembu yeCaf, iChampions League, i-Al Ahly yase-Egypt isivele ikhalile ngokuthi lo mdlalo ube seMorocco la iWydad Casablanca abazobhekana nayo kungeyakhona.
“Nginxusa abalandeli baseNigeria ukuthi baphume bazoseseka. Indodana yabo yolahleko uNdah ibuyela ekhaya.
“Sizodlalela enkundleni ye-Akwa United la uNdah awinele khona iligi ngaphambi kokuza kwi-Orlando Pirates.”
Previous Previous post: UZwane uphawula ngendodana kaScara Ngobese kwiChiefs
Next Next post: UMbesuma uncoma uPeter Shalulile, akanandaba nerekhodi lakhe